Ingqondo yebrand - Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Umxholo webranti -
Ixabiso lobuchwephesha obuphambili lilele ekusebenzeni nasekusebenziseni Unyango olunobungcali, ushishino olufanelekileyo kunye neemfuno zinzima kwaye zahlukahlukene, kwaye usetyenziso lwetekhnoloji lune-signifi-cance ebanzi. dlala indima enkulu kunye nexabiso lokuyila kumthengi wethu kwi-momen ebalulekileyo
I-AKF izimisele ukusebenzisa eyona teknoloji ihambele phambili kwaye ikhulile-
I-nology eguqukayo ukusombulula iingxaki zabathengi kunye nokukhuthaza ukudityaniswa konyango kunye nonyango. Asikulangazeleli ukwazisa
Itekhnoloji, kodwa kuqala kwiinto zonke, sinokuqonda okunzulu kubathengi, kwaye sizama ukufumana isisombululo esisebenza ngokwenyani esidibanisa iimfuno zangoku nezexesha elizayo, kwaye sinokuphucuka kokukhula.
I-AKF iyaqhubeka nokwandisa utyalomali lwe-R & D, ihlala ikhulile ngokuqola kunye netekhnoloji ekhokelayo, kunye nobungcali bayo
iqela elimamelayongokuchanekileyo ukudibanisa izixhobo ezahlukeneyo, kwaye usebenzise ubuchule njengoko kufuneka, bonelelagqolo
iinkonzo zokulandelela, kwaye ngokukhawuleza phendula kumthengiiilima, kwaye ukhule kunye nabathengi.
Imfuno zabaThengi yeyona nto iqhubayo kuphuhliso lwethu, siyahambelana nomthengi-centrist, ngokukhawulezaukumelana nemfuno yabathengi, kwaye ngexesha elifanelekileyo kubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kubathengi.
Hayi ngokukhawuleza ukuthetha kunokwenza. Imfezeko yinto engabonakaliyo yeshishini.
Sisoloko siphumelela abathengi abathembekileyo nangakumbi ngokuthembeka.
lf asikwazi ukugcina isantya ngokutshintsha kwamaxesha, i-en-terprises iyakuma. Ukuqamba, ubuvulindlela bokucinga ngokutsha, iindlela ezintsha kunye neempumelelo ezintsha zenza ukuba sihlale siqhubela phambili.
Sisebenzisa ngokungqongqo inkqubo ye-QMS yolawulo lwe-nent, kwaye siqinisekisa umgangatho we-prod-cts ngotyalo-mali lwe-R & D, ulawulo olungqongqo lwemigangatho, imigangatho yomgangatho ongqongqo, ukuvavanywa okungqongqo kunye nokuqinisekiswa.
Ukusebenzisana kweqela kukhuphiswano. Iqela lakhelwe kuphela kwisiseko sokuncedisana kunye nokuncedisana, kwaye amasebe asebenza kunye, kwisiseko sale meko, ukusebenza ngokukuko kwenkampani kunye nokulingana kungaphuculwa.